संकटमा नेपाल, ८० रन बनाउँदा ६ विकेट गुम्यो ! – Everest Dainik – News from Nepal
संकटमा नेपाल, ८० रन बनाउँदा ६ विकेट गुम्यो !
काठमाडौं, साउन १२ । आइसीसी टि–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा सिंगापुरले दिएको १९२ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले सस्तैमा ६ विकेट गुमाएको छ । नेपालले छैठौं विकेटकारुपमा करन केसीलाई शून्य रनमै गुमाएको हो । यसअघि नेपालले विनोद भण्डारीलाई ९, रोहित कुमार पौडेललाई ५, शरद भेषावकरलाई ७, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ३९ र कप्तान पारस खड्कालाई १२ रनमा गुमाएको हो । ताजा अवस्थामा नेपालले ११ ओभरमा ८० रन बनाएर ६ विकेट गुमाइसकेको छ ।